PLNCoin စျေး - အွန်လိုင်း PLNC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PLNCoin (PLNC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PLNCoin (PLNC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PLNCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 109.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PLNCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PLNCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PLNCoinPLNC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000373PLNCoinPLNC သို့ ယူရိုEUR€0.000317PLNCoinPLNC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000285PLNCoinPLNC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000341PLNCoinPLNC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00335PLNCoinPLNC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00236PLNCoinPLNC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00831PLNCoinPLNC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0014PLNCoinPLNC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000497PLNCoinPLNC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000519PLNCoinPLNC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00836PLNCoinPLNC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00289PLNCoinPLNC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00204PLNCoinPLNC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0279PLNCoinPLNC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0629PLNCoinPLNC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000512PLNCoinPLNC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000564PLNCoinPLNC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0116PLNCoinPLNC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00259PLNCoinPLNC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0395PLNCoinPLNC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.441PLNCoinPLNC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.144PLNCoinPLNC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0274PLNCoinPLNC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0103
PLNCoinPLNC သို့ BitcoinBTC0.00000003 PLNCoinPLNC သို့ EthereumETH0.0000009 PLNCoinPLNC သို့ LitecoinLTC0.000006 PLNCoinPLNC သို့ DigitalCashDASH0.000004 PLNCoinPLNC သို့ MoneroXMR0.000004 PLNCoinPLNC သို့ NxtNXT0.028 PLNCoinPLNC သို့ Ethereum ClassicETC0.00005 PLNCoinPLNC သို့ DogecoinDOGE0.105 PLNCoinPLNC သို့ ZCashZEC0.000004 PLNCoinPLNC သို့ BitsharesBTS0.0136 PLNCoinPLNC သို့ DigiByteDGB0.0119 PLNCoinPLNC သို့ RippleXRP0.00123 PLNCoinPLNC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 PLNCoinPLNC သို့ PeerCoinPPC0.0012 PLNCoinPLNC သို့ CraigsCoinCRAIG0.165 PLNCoinPLNC သို့ BitstakeXBS0.0155 PLNCoinPLNC သို့ PayCoinXPY0.00633 PLNCoinPLNC သို့ ProsperCoinPRC0.0455 PLNCoinPLNC သို့ YbCoinYBC0.0000002 PLNCoinPLNC သို့ DarkKushDANK0.116 PLNCoinPLNC သို့ GiveCoinGIVE0.785 PLNCoinPLNC သို့ KoboCoinKOBO0.0826 PLNCoinPLNC သို့ DarkTokenDT0.000343 PLNCoinPLNC သို့ CETUS CoinCETI1.05